1.टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेट भनेको के हो? यस्ले कसरी काम गर्छ?
टेस्टोस्टेरोन नर हर्मोन हो जुन मानव शरीरमा प्राकृतिक रूपमा हुन्छ। हर्मोन मुख्यतया पुरुषहरुमा अण्डकोष द्वारा उत्पादन गरिन्छ। यो हार्मोनले मानिसको उपस्थिति र यौन विकास बढाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पुरुषहरूका क्यारेक्टरहरू, जस्तै हड्डीको मास, मांसपेशीहरू, शुक्राणु उत्पादन, र सेक्स ड्राइभ, सबै टेस्टोस्टेरोनले उत्प्रेरित गर्छन्। जे होस्, टेस्टोस्टेरोन उत्पादन एक उमेरको रूपमा तल जान्छ। अर्कोतर्फ, टेस्टोस्टेरोन एक एनाबोलिक स्टेरॉइड हो जुन शरीरमा इंजेक्सन गरिएको छ मांसपेशी निर्माण र अन्य पुरुष विशेषताहरूलाई बढाउनमा मद्दत गर्न। कम टेस्टोस्टेरोनको स्तरबाट पीडित जो कोहीलाई पनि शरीरमा प्राकृतिक हार्मोनको उत्पादन सुधार गर्न टेस्टोस्टेरोन लिन सल्लाह दिइन्छ।
टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate (1255-49-8) एक एनाबोलिक स्टेरॉइड हो जुन कम टेस्टोस्टेरोन तहको प्रभावबाट पीडित व्यक्तिहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। शरीरमा पर्याप्त टेस्टोस्टेरोनको अभावले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै कम कामवासन, कम शुक्राणु स्तर, र वयस्क समयमा गहिरो आवाज, दाह्री, वा मांसपेशीहरू जस्तै पुरुष विशेषताहरूको विकासमा ढिलाइ गर्न सक्छ। यदि तपाईं एक औषधि खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई मांसपेशी निर्माणमा मद्दत गर्दछ र एक एथलीटको रूपमा तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न, तब टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपीनेट सबैभन्दा राम्रो पूरक हुनेछ। यो एनाबोलिक स्टेरोइड गुणस्तर परिणामहरू प्रदान गर्दछ जति लामो तपाईं डोज निर्देशनहरूको पालना गर्नुहुन्छ।
सामान्यतया, टेस्टोस्टेरोन उत्पादकहरूले शरीरलाई लामो समयसम्म सक्रिय रहनको लागि विभिन्न एस्टरको साथ औषधि संलग्न गर्दछ। Phenylpropionate साधारण एस्टर मध्ये एक हो जुन टेस्टोस्टेरोनको साथ संलग्न छ XXUMX दिन4दिन को लागी औषधि को सक्रिय जीवन को लामो गर्न। बॉडीबिल्डर्स र एथलीटहरू संसारमा सबैभन्दा सक्रिय टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपीनेट प्रयोगकर्ताहरू हुन्। औषधीले उनीहरूलाई समग्र शरीरको शक्ति बढाउन, मांसपेशीहरू निर्माण गर्न, र यौन ड्राइभ सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। जहाँसम्म, अन्य स्टेरोइड प्रयोग गर्दा, यो औषधी लिनु अघि तपाईं सधैं मेडिकल जाँच गर्न सल्लाह दिइन्छ। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपीओनेट प्रयोग गर्दछ एक व्यक्ति देखि अर्को फरक हुन सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेटले कसरी काम गर्दछ?
टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate (1255-49-8) अन्य अनाबोलिक स्टेरोइडहरू जस्तै यो तपाईंको शरीरलाई अधिक टेस्टोस्टेरोन हर्मोन उत्पादन गर्न उत्तेजित गर्दछ। औषधिले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईंको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको पर्याप्त र स्थिर स्तर छ। एकचोटि यी पुरुष हार्मोन स्तरहरू तपाईंको शरीर प्रणालीमा पर्याप्त छन्, तपाईं स्वचालित रूपमा सुविधाहरूको आनन्द लिन थाल्नुहुनेछ, र तपाईं सजिलै आफ्नो क्यारियर लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो हर्मोन बोसो घटाउन, मांसपेशि द्रव्यमान बनाए र ओस्टियोपोरोसिसबाट तपाईलाई बचाउन जिम्मेवार छ।
कुनै पनि बॉडीबिल्डरका लागि दुबै मांसपेशीहरू र शरीरको शक्ति दुवै प्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धामा राम्रो प्रदर्शनको लागि महत्वपूर्ण छ। टेस्टोस्टेरोन हर्मोन भारी कसरत पछाडि टक्स रिकभरीमा बढि मद्दत पुर्‍याउँछ चक्रहरूको समयमा। यी हार्मोनहरू एन्ड्रोजन रिसेप्टर्स (एआर) लाई बाँध्छ मोटा घाटा र मांसपेशि वृद्धि वृद्धि गर्न साथै मर्मत गर्न। जहाँसम्म, राम्रो टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेट परिणामहरूको लागि, तपाईंले उचित आहार र प्रशिक्षणको साथ खुराकको साथ लिनु पर्छ। जब तपाइँ टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट खुराक लिन थाल्नुहुन्छ तब आफ्नो ट्रेनर र पोषण विज्ञलाई सूचित गर्नुहोस्। थप स्वास्थ्य जटिलताहरूबाट बच्न कुनै गम्भीर दुष्प्रभाव देख्नुभयो भने तुरुन्त आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
2.टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट चक्र
टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट लगभग6बाट 8 हप्ता सम्म प्रशासित हुनुपर्दछ, जुन चक्रको अन्त्य सम्ममा तपाइँले के प्राप्त गर्नुपर्दछ त्यसमा निर्भर गर्दछ। तपाईंको डाक्टरले पनि उत्तम डिजाइन गर्ने छ टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate चक्र तपाईंको मेडिकल सर्त जाँच गरेपछि। कहिलेकाँही डाक्टरले खुराक अवधिलाई बल दिन वा यसलाई कम गर्न सक्दछ। चक्रको अवधिमा औषधि प्रक्रिया निगरानी गर्न नियमित चिकित्सा जाँच आवश्यक हुन्छ। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट एक्लै चक्रको बखत वा राम्रो परिणामका लागि अन्य anabolic स्टेरोइडको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि तपाईको औषधिसँग परामर्श नगरी औषधि जोड्नुहोस्।
शुरुआतीहरूलाई कम खुराक र छोटो चक्रको साथ सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ, जुन राम्रो परिणामहरूको लागि पछि समायोजित गर्न सकिन्छ। उन्नत टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट प्रयोगकर्ताहरू अधिकतम अवधि 8 हप्ता वा सो भन्दा बढीमा रहन सक्छन्। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट चक्र घटाउने वा बढाउने काम नगर्नुहोस्, यदि डाक्टरले तपाईंलाई त्यसो गर्न सल्लाह दिएन भने। कहिलेकाँही चिकित्सकहरूले मध्य चक्रलाई रोक्न सक्छन् यदि तपाईंले गम्भीर साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुभयो जसले स्वास्थ्य जटिलता निम्त्याउन सक्छ। मानव शरीर विभिन्न ड्रग्स संग फरक प्रतिक्रिया; यसैले, यो स्वचालित होइन कि औषधिले तपाईंको इच्छा अनुसार काम गर्दछ।
3.टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट परिणामहरू
टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate (1255-49-8)जब उचित रूपमा प्रयोग हुन्छ, सकारात्मक परिणामहरू दिन्छ र अन्तत: तपाईंलाई लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसकारण, सहि खुराक, डाइट, र वर्कआउट्सले तपाईंलाई गुणस्तर परिणामहरूको ग्यारेन्टी दिन्छ। यहाँ केहि सामान्य टेस्टोस्टेरोन फेनिल्प्रोपियनेट परिणामहरू छन्;
मांसपेशी वृद्धि, एक कारण यो हो कि तपाईले टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेटलाई बडिबिल्डरको रूपमा लिन शुरू गर्नुपर्दछ किनकि यसले मांसपेशीहरूको बृद्धिलाई मद्दत गर्दछ। मांसपेशिहरु एक शरीर सौष्ठव को जीवन मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र यो हासिल गर्न को लागि तपाइँ सही मांसपेशिको विकास बृद्धि गर्न स्टेरोइड लिन आवश्यक छ। प्रत्येक बडी बिल्डर वा खेलाडी दुबला मांसपेशीहरू राख्न चाहन्छ, जुन यो शक्तिशाली औषधि सेवन गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ।
बोसो जलाउने, काट्ने चक्रहरू पनि आवश्यक छ किनकि उनीहरूले शरीरमा शरीरका अतिरिक्त बोसोहरू हटाउँदछन्। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट एक धेरै शक्तिशाली कटिंग पूरक हो किनकि यसले मेटाबोलिज्मलाई बढावा दिन्छ, जसले शरीरको बोसोको द्रुत बर्न निम्त्याउँछ। तपाईं ड्रग एक्लो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा अन्य एनाबोलिक स्टेरोइडको साथमा बोसो जलेको प्रक्रियामा जोड दिनुहुनेछ।
चाँडो मांसपेशि पुन: प्राप्ति र मर्मत, व्यायाम धेरै चोटि जिममा वजन उठाएर तपाईंको मांसपेशिहरु तन्काउन सक्छ। त्यसपश्चात तपाईंले भोग्नु भएका पीडाहरूले तपाईंको प्रशिक्षणमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ र कहिलेकाँही अभ्यासका लागि जारी राख्न तपाईंलाई गाह्रो बनाउँदछ। जे होस्, टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट लिँदा, यो तपाईंको चिन्ताहरूको कम्तिमा हुनुपर्दछ किनकि औषधीले टिश्यू हिलिंग प्रक्रियालाई बढावा दिन्छ। तपाइँको मांसपेशिहरु सँधै चाँडै निको हुनेछ तपाईलाई प्रत्येक दिन कामको लागि अनुमति दिन र तपाइँको लागि आफ्नो इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँदछ।
समग्र शरीर शक्ति वृद्धि गर्दछ, काम गर्न पर्याप्त ऊर्जाको अभाव र प्रभावी ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न सधैं सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो जुन धेरै शरीर सौष्ठवहरूले आफ्नो कर्तव्यको रेखामा सामना गर्छन्। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेटले तपाईको उर्जाको स्तरलाई बढावा दिदैछ कि तपाईलाई लामो घण्टा सम्म तालिम लिन र चाँडो आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न दिनेछ।
हड्डी प्रणालीको सुदृढीकरण, अस्टियोपोरोसिस धेरै मानिसहरूलाई सामना गर्नुपरेको चुनौती हो, र यो औषधीले हड्डी रोगसँग लड्न मद्दत गर्दछ। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेटले तपाईको हड्डी प्रणालीको स्वास्थ्य सुधार गर्दछ। धेरै वर्षदेखि, चिकित्सकहरूले यो औषधी अस्टियोपोरोसिस बिरामीहरूलाई मद्दत गर्न प्रयोग गर्दै आएका छन्। अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट हड्डीको घनत्व गुमाउने बिरूद्ध लड्न सबैभन्दा शक्तिशाली औषधी हो।
सेक्स ड्राइव र भूख सुधार गर्नुहोस्; टेस्टोस्टेरोन स्तर बढाउनाले स्वत: तपाईंको कामवासना सुधार गर्दछ। अर्कोतर्फ, तपाईंको भूक पनि बढाइनेछ। तसर्थ, यसले टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट दुबै बिल्डियर्स र कम सेक्स ड्राइभसँग संघर्ष गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि उत्कृष्ट उत्पाद बनाउँदछ। बल्कि cy चक्रहरूमा, तपाईको भोक पनि सुधार हुनेछ र तपाईलाई इच्छित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँदछ।
टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट साइड इफेक्टहरू
कुनै पनि अन्य औषधी जस्तै, टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेट (1255-49-8) योसँग यसको नकारात्मक पक्ष पनि छ जुन प्रायः प्रयोगकर्ताहरूले अनुभव गर्दछन् जसले यसलाई दुरुपयोग गर्छन्। तपाईंले सँधै खुराक निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्दछ यदि तपाईं यी साइड इफेक्टहरू कम गर्न चाहनुहुन्छ भने। जहाँसम्म, मानव शरीर को जटिलता को कारण, केहि व्यक्तिहरूले सही खुराक लिए पनी साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्न सक्दछन्, तर चिकित्सकहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन्। केहि सामान्य टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेट साइड इफेक्टहरू;
औषधिले तपाईंको शरीरमा एक्ने र रेशेस निम्त्याउन सक्छ
उच्च दबाव हुन सक्छ
तपाईं प्रोस्टेट को hypertrophy अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ
केहि उपयोगकर्ताहरु लाई टक्कवपन हुन सक्छ
थप रूपमा, त्यहाँ केहि सामान्य साइड इफेक्टहरू छन् जुन तपाईंले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ, जुन केहि दिनहरूमा अदृश्य हुन्छ। तिनीहरूले समावेश गर्दछ, खुजली र इंजेक्शन क्षेत्र वरिपरि सूजन, तर यदि यो आशा भन्दा खराब भयो भने, तपाइँको डाक्टरले सही उपचार प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। शुभ समाचार यो छ कि यदि तपाईले आफ्नो डाक्टरलाई समयमै सूचित गर्नुभयो भने टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट साइड इफेक्टको अधिकियोजन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईको डाक्टरको स्वीकृति बिना माथिका कुनै पनि प्रभावहरु लाई अनुभव गर्नुभयो भने ड्रग लिन नखोज्नुहोस्। कहिलेकाँही गम्भिर प्रभावलाई उल्टाउन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ यदि औषधी ढिलो भयो भने।
4.टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपियोनेटेट खुराक
सही खुराक जहिले पनि तपाईंलाई गुणवत्ताको परिणाम र सही समयमा ग्यारेन्टी गर्दछ। सिफारिस गरिएको टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपियोनेट खुराक 100-200 मिलीग्रामको दायरा जुन प्रत्येक तीन दिनमा एक पटक लिनुपर्दछ। नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि, यसलाई पहिलो चक्रमा कम खुराकको साथ सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ त्यसपछि यसलाई निम्न चक्रहरूमा समायोजित गर्न सकिन्छ। खुराक एक इंजेक्शन र इंट्रामस्क्युलरली मार्फत प्रशासित हुनुपर्दछ। सामान्यतया, तपाईले 6-8 हप्ताको लागी औषधि लिनु पर्छ। यद्यपि यो परिवर्तन हुन सक्दछ कसरी तपाईंको शरीर टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेटसँग प्रतिक्रिया गर्दछ। तपाईको डाक्टरले तपाईको चिकित्सा अवस्था जाँच गरेपछि 100mgs प्रति3दिन भन्दा कम खुराक प्रयोग गर्न सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। महिलालाई कम टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट खुराक लिन सल्लाह दिइन्छ पुरुष गुणहरू विकास गर्नबाट जोगिन।
अर्कोतर्फ, उन्नत बडिबिल्डरहरू वा एथलीटहरू 200mgs प्रति3दिन चाहिने लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न उत्तम खुराक हुनेछ। राम्रो नतिजाको लागि सँधै तपाईंको खुराकको साथ उचित डाइट र वर्कआउटको साथ अधिक प्रयोग गर्नुहोस् ताकि यदि तपाईं मांसपेशिहरू निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ वा चक्र काट्ने क्रममा। यो औषधि अन्य अनाबोलिक स्टेरोइडको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यो एक्लो प्रयोग हुँदा पनि गुणस्तर परिणाम दिन्छ। बलकि cy चक्रको लागि तपाईले टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियनेटलाई अन्य स्टेरोइडसँग स्ट्याक गर्नुपर्ने हुन सक्छ तर तपाईलाई उत्तम संयोजन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नको लागि तपाईको डाक्टर संलग्न गर्नुहोस्। साथै, सबै खुराक निर्देशनहरूको पालना गर्न नबिर्सनुहोस् किनकि अधिक मात्रा लिनाले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ।
5.टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट आधा जीवन
टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेटसँग4दिनको5दिनको सक्रिय जीवन हुन्छ तपाईंको शरीर प्रणालीमा यो एक पटक इन्जेक्सन गरिएको छ। तसर्थ, तपाईंको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको स्थिर आपूर्ति कायम गर्न औषधि प्रत्येक तीन दिनमा वा हप्तामा एक पटक लिनुपर्दछ। यसले टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेटलाई धेरै लामो समयदेखि सक्रिय जीवनको कारण धेरै शरीर सौष्ठवहरूको लागि एक उत्तम anabolic स्टेरॉइड बनाउँदछ। त्यहाँ अर्को इंजेक्शन क्षेत्र ठीक गर्न को लागी पर्याप्त समय छ तपाईंले अर्को खुराक लिनु अघि। याद गर्नुहोस्, टेस्टोस्टेरोनले मांसपेशीहरूलाई निको पार्ने प्रक्रियालाई पनि बृद्धि गर्दछ, त्यसैले यो औषधि कुनै पनि एथलीट वा बडीबिल्डरको लागि उत्तम पूरकको रूपमा काम गर्दछ।
6.टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट काट्नका लागि
टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपियोनेट पाउडर चक्र काट्ने मा एक महान पूरक बनाउँछ। यस टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको स्थिर आपूर्तिले मेटाबोलिज्म बढाउँदछ जुन अन्ततः शरीरको बोसो घटाउन मद्दत गर्दछ। एक शरीर सौष्ठवकर्ता को रूप मा, तपाईं काटि चक्र को माध्यम बाट पार गर्न को लागी शरीर वसाबाट छुटकारा पाउन सक्छ कि तपाईं आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न बाट रोक्न सक्छ। शरीरको बोसो छालाको मुनि जम्मा हुन्छ र यसले तपाईंलाई क्वालिटी र देखिने दुबला मांसपेशीहरू विकास गर्न गाह्रो बनाउन सक्छ। धेरै वर्षदेखि हजारौं एथलीटहरूले यसलाई दुबै कटौती र बल्किंगको लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्।
तपाइँ टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियोनेटलाई अन्य उत्तम एनाबोलिक स्टेरोइडहरूसँग संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ चक्रहरू काट्नको लागि जस्तै Winstrol, Anavar वा trenbolone राम्रो परिणामको लागि। तपाईको हालको अवस्था र तपाईले के प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै तपाईको औषधीले तपाईलाई मांसपेशिहरु प्राप्त गर्न सही काट्ने खुराक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ किनकि तपाईले अनावश्यक शरीरको बोसो काट्नु हुन्छ। एथलिट वा बडीबिल्डरको रूपमा तपाईंको समग्र शरीरको उपस्थिति बढाउन, तपाईं टेस्टोस्टेरोन फेनिल्प्रोपियनेट स्ट्याकिंग डोज साथ उचित आहारको साथ साथ वर्कआउटको साथमा जानु पर्छ।
7.टेल्सोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट बल्किंगका लागि
यहाँ तपाईंसँग केवल एक लक्ष्य छ, जुन सम्भावित छोटो समयमा पनि मांसपेशि जनहरू प्राप्त गर्नु हो। बॉडीबिल्डर्स सामान्यतया बल्कि cycle चक्रबाट सुरू हुन्छ, जुन त्यसपछि काट्ने चक्रको अनुसरण गरिन्छ। उन्नत शरीर सौष्ठवहरू पनि मांसपेशीहरूको मासको स्तर प्राप्त गर्न र यसलाई कायम राख्न नियमित रूपमा बल्किंग चक्रबाट गुज्रन्छ। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट बल्किंग चक्रमा प्रयोग हुने एनाबोलिक स्टेरोइड्स मध्ये एक हो। जे होस्, केहि एथलीटहरूले परिणामलाई छिटो बनाउनको लागि यसलाई अन्य औषधिहरूको साथ स्ट्याक गर्न रुचाउँछन्। बल्कि cy चक्रमा भारी व्यायामहरू समावेश हुन्छन् जुन तपाईंको मांसपेशिहरू सीमित गर्न सक्छ, र यदि तपाईंसँग टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेट जस्ता सही पूरकहरू छैनन् भने, तपाईंले गम्भीर दुखाइ अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
यस एनाबोलिक स्टेरोइड्सले मांसपेशिहरूको बृद्धि गर्नका साथै टिश्यु हिलिंग प्रक्रिया पनि छिटो पार्दछ। तसर्थ, जब तपाइँको लिने टेक्स्टोरोन फेनिलप्रोपायोनेट बल्किंगका लागि, तपाईं सामूहिक मांसपेशी लाभ र द्रुत टिशू रिकभरीको लागि निश्चित हुनुहुन्छ। औषधिसँग पनि लामो एस्टर छ, जसले लामो सक्रिय जीवनमा अनुवाद गर्दछ, त्यसैले तपाईं केवल हप्तामा दुई पटक डोज इन्जेक्सन गर्नुहुनेछ। यसैले, अर्को डोजमा जानु भन्दा पहिले इंजेक्शन क्षेत्रहरूलाई निको पार्दै। तपाईको डाक्टर, पोषण विशेषज्ञ र ट्रेनरले तपाईलाई सम्पूर्ण बल्किंग प्रक्रियामा मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ। जहिले पनि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरू तपाईंको लक्ष्य बारे बढी सचेत छन् जब तपाईं बल्किंग शुरू गर्दै हुनुहुन्छ वा उचित मार्गनिर्देशनको लागि चक्रहरू काट्दै हुनुहुन्छ।
8.टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate फायदाहरू
टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपीओनेटले प्रयोगकर्ताहरूलाई बिभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्दछ जसले यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्दछ र खुराक निर्देशनहरूको पालना गर्दछ। कुनै पनि अन्य एनाबोलिक स्टेरोइड जस्तै, तपाईं टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेट निर्माता र तपाईंको चिकित्साले यी सुविधाहरूको आनन्द लिनको लागि प्रदान गरिएको प्रयोग निर्देशनहरूको पालना गर्नै पर्छ। यो औषधि दुबै खेलकूद र चिकित्सा क्षेत्रमा उपयोगी साबित भएको छ। विभिन्न टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट समीक्षाहरू हेर्दै, तपाईंले नोट गर्नुहुनेछ कि धेरै प्रयोगकर्ताहरू खुसी छन् र यो सशक्त एनाबोलिक स्टेरोइड प्रयोग गरे पछि उनीहरूको सन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। केहि सबैभन्दा प्रख्यात टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेट फाइदाहरू:
सबैलाई तपाईंले शरीरको निर्माणको लागि अनाभार (ओक्स्यान्ड्रोलोन) बारे जान्न आवश्यक छ(नयाँ ब्राउजर ट्याबमा खोल्छ)
लामो सक्रिय जीवन
टेस्टोस्टेरोन फेनिल्प्रोपियनेट प्रयोग गर्ने उत्तम अंश (1255-49-8) त्यो हो कि तपाईले हप्तामा दुई पटक मात्र खुराक लिनु पर्छ। यसले यो एनाबोलिक स्टेरोइडलाई बॉडीबिल्डर्स र एथलीटहरू सबैभन्दा मन पर्ने औषधिहरू बनाउँछ। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट तपाईंको शरीर प्रणालीमा लगभग4देखि5दिनसम्म सक्रिय रहन्छ, जसले तपाईंको इंजेक्शन क्षेत्रहरूलाई निको पार्ने पर्याप्त समय दिन्छ तपाईंले अर्को खुराक लिनु अघि।
छोटो समयमा गुणवत्ता परिणामहरू प्रदान गर्दछ
टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपीओनेट आज बजारमा केहि द्रुत-अभिनय एनाबोलिक स्टेरोइडहरू मध्ये एक हो। तपाईं अधिकतम 8 हप्तामा यो औषधि मात्र लिनुहुनेछ, र तपाईं आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ कि तपाईं यसलाई काट्ने वा बल्किंगको लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। जे होस् तपाईको चिकित्सकले तपाईको लक्षहरु वा औषधि लिई पछाडि प्रगतिको आधारमा चक्र तान्न सक्छ, यो अझै पनि anabolic स्टेरोइड को दुनिया मा छोटो खुराक चक्र को एक छ।
तपाइँको प्रदर्शन बृद्धि गर्दछ
एक खेलाडी वा बॉडीबिल्डरको रूपमा, तपाईंलाई आफ्नो क्यारियर लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न ऊर्जा र शरीरको बल चाहिन्छ। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेटले प्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धा दुबैमा तपाईंको समग्र प्रदर्शन बढाउँदछ। अर्कोतर्फ, यो औषधि एथलीटहरू र बॉडीबिल्डर्सलाई व्यायाम पछि वा प्रतिस्पर्धा पछि मांसपेशियोंको दुखाइ र थकान कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईं गुणस्तरीय नतीजाहरूको आनन्द लिन सबै डोज निर्देशनहरू पालना गर्नुहुन्छ। जब तपाइँ तपाइँको टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट चक्र पूरा गर्नुहुन्छ, तपाइँले प्रतिस्पर्धा र प्रशिक्षण मार्फत लैजानको शक्ति विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै टेस्टोस्टेरोन अभाव प्रभावहरूको उपचार
चिकित्सा जगतमा, डाक्टरहरूले टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट प्रयोग गर्छन् कम टेस्टोस्टेरोन प्रभाव भएका बिरामीहरूको उपचार गर्न, जस्तै पुरुषहरूमा कम सेक्स ड्राइभ, अस्थिसुसार, अन्य रोगहरू मध्ये। टेस्टोस्टेरोनको कम स्तर, विशेष गरी पुरुषहरूमा, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको साथ आउँदछ जुन टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेट प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ। उदाहरण को लागी, जब पुरुष विशेषताहरु विकास मा ढिला, तब यो चिकित्सकहरु को लागी एक भन्दा मनपर्ने औषधि हो।
न्यूनतम साइड इफेक्टहरू
यद्यपि सबै एनाबोलिक स्टेरोइडहरू विभिन्न साइड इफेक्टका साथ आउँदछन्, टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइओनेट डोजहरू लिँदा अत्यन्त न्यूनतम गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ यदि तपाईं यसलाई ठीकसँग लिनुहुन्छ भने। यो धेरै कम साइड इफेक्टको साथ बजारमा केहि एनाबोलिक स्टेरोइड मध्ये एक हो। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट साइड इफेक्टको बहुमत केवल औषधीको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई देखा पर्दछ। जब सम्म तपाईं सबै खुराक निर्देशनहरूको पालना गर्नुहुन्छ, तपाईं जानु राम्रो हुनुहुन्छ, र तपाईं सबै टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेट फाइदाहरू पाउनुहुनेछ।.
9.टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट समीक्षा
सामान्यतया, धेरै ग्राहकहरूले समीक्षा र रेटिंगहरू मार्फत विशेष उत्पादको बारेमा आफ्नो राय व्यक्त गर्छन्। केवल अन्य चिकित्सा उत्पादनहरू जस्तै, टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपीनेट विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूबाट फरक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दै आएको छ। अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू ड्रगले डेलिभर गरेको नतिजासँग सन्तुष्ट छन् यसैले खेलकुद विश्वमा जहाँ एथलीटहरू र बॉडीबिल्डरहरूले उनीहरूलाई आफ्नो क्यारियरको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्छन्। खेलाडीहरूको लागि, औषधीले धेरैलाई बल्किंग चक्रको दौरान मांसपेशीहरूको द्रव्य बढाउन मद्दत पुर्‍याएको छ र चक्रहरू काट्ने क्रममा शरीरको बोसोहरू जलाउँदै छ।
चिकित्सा संसारमा, टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपियनेटले उत्कृष्ट रेटिंग र सकारात्मक समीक्षा प्राप्त गरेको छ। चिकित्सकहरूले कम टेस्टोस्टेरोन प्रभावको उपचारमा यस औषधिको सफलता रिपोर्ट गरेका छन् जुन प्राय जसो पुरुषमा हुन्छन्। यस लेखमा माथि उल्लेख गरिएझैं कम टेस्टोस्टेरोनको स्तरले कम सेक्स ड्राइभ, अस्टियोपोरोसिस, र पुरुष विशेषताहरूको विकासमा ढिलाइ गर्दछ जस्तै आवाज गहिराइ, दाढी, र अन्यमा। हजारौं बिरामीहरूले पनि विभिन्न रोगहरूको सफल उपचार पछि टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेटको प्रशंसा गरिरहेका छन्।
10 सबैभन्दा लोकप्रिय एनाबोलिक स्टेरोइड कच्चा पाउडर 2019 मा(नयाँ ब्राउजर ट्याबमा खोल्छ)
साथै, केहि प्रयोगकर्ताहरू टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेटसँग सबैभन्दा खराब अनुभव भएको गुनासो गर्छन्। जहाँसम्म, उनीहरूले आफ्नो गडबडीलाई ओभरडोज गर्ने वा टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपाइनेटको दुरुपयोगको श्रेय दिएका छन्। मानव शरीर फरक छन्, र प्रत्येक औषधि जुन तपाईंको साथीको लागि काम गर्दैन स्वचालित रूपमा तपाईंको लागि काम गर्दछ। हामी जहिले पनि हाम्रा सबै उत्पाद प्रयोगकर्ताहरूलाई चिकित्सक जाँच गर्न सल्लाह दिन्छौं उनीहरूले खुराक लिन थाल्नु अघि। एक राम्रो अनुभवको लागि टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट खुराक प्रक्रियामा आफ्नो डाक्टरलाई समाहित गर्नु यो सधैं राम्रो विचार हो।
10।टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट बिक्रीको लागि
त्यहाँ धेरै टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट आपूर्तिकर्ताहरू दुबै अनलाइन र विश्वभरका भौतिक स्टोरहरूमा उपलब्ध छन्। यद्यपि तपाईलाई धेरै होशियार हुनु आवश्यक छ यदि तपाईलाई उच्च-गुणको औषधि पाउनुपर्दछ जुन तपाईको चक्रको अन्तमा गुणस्तर परिणामहरूको ग्यारेन्टी दिन्छ। तपाईले फेला पार्नुहुने प्रत्येक टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपीओनेट निर्माता वास्तविक हुँदैन, केही पैसा बनाउनको लागि त्यहाँ हुन्छन्, र उनीहरूले उनीहरूको नतिजा लिन सक्ने परिणामहरूको बारेमा चिन्ता गर्दैनन्। तपाईं अघि टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट किन्नुहोस्, पहिले तपाइँको अनुसन्धान गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट आपूर्तिकर्ता कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर तपाइँले कुनै अर्डर गर्नु अघि बुझ्नुहुन्छ। बिभिन्न ग्राहक समीक्षा पढ्नुहोस् र साथ साथै कम्पनी रेटिंगहरूमा पनि हेर्नुहोस्।
हामी यस क्षेत्रमा अग्रणी टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट आपूर्तिकर्ता र निर्माता हौं। हाम्रो वेबसाइट प्रयोगकर्ता-मैत्री छ, ताकि तपाईं सजिलैसँग आफ्नो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट, वा डेस्कटप तपाईंको घर वा अफिसको सुविधाबाट तपाईंको अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जहिले पनि यो कुरा निश्चित गर्दछौं कि हामी सब थोकहरू छोटो समयभित्र नै डेलिभर गर्दछौं। तिमी सक्छौ टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट पाउडर किन्नुहोस् थोकमा वा तपाईंको बल्किंग वा काट्ने चक्रहरूको लागि पर्याप्त छ। याद गर्नुहोस्, जतिसुकै सजिलै तपाइँ औषधि लिन सक्नुहुन्छ, तपाइँको डाक्टरको निर्देशन बिना यसलाई लिन सुरू नगर्नुहोस्।
यसका साथै हामी हाम्रा वफादार ग्राहकहरूलाई उनीहरूको प्लेटफर्ममा अर्डर गर्नु अघि उनीहरूको देशका कानूनहरूले केहि एनाबोलिक स्टेरॉइड खरीद गर्ने वा कब्जा गर्ने कुराको बारेमा बुझ्ने सल्लाह दिन्छौं। हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई हाम्रो गुणवत्ता उत्पादनहरू खरीद गर्नका लागि कानून लागूकर्ताहरूसँग समस्यामा पार्न चाहँदैनौं। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट बडिबिल्डि buying खरीद गर्दा केहि प्रतिबन्धहरू छन् कि छैन भनेर तपाइँको डाक्टरसँग यकिन गर्नुहोस्। तपाईले हामीलाई कुनै पनि बेला सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई अर्डर गर्न आवश्यक पर्दा वा जब तपाईको चिन्ता वा हाम्रो उत्पादनको बारेमा प्रश्नहरू छन्। हाम्रो मद्दत डेस्क प्रतिनिधिहरू तपाईको सेवाको लागि सँधै तयार छन्।
11।टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपीओनेट बनाम टेस्टोस्टेरोन प्रोपियनेट शरीर सौष्ठवको लागि
त्यहाँ दुबै औषधिहरू बीच कुनै खास भिन्नता छैन किनकि तिनीहरू समान तरिकाले काम गर्दछन्। तिनीहरू सबै एनाबोलिक स्टेरोइडहरू हुन्, र तिनीहरूले लगभग4बाट5दिनको समान आधा जीवन साझा गर्दछन्। तपाईं दुई मध्ये कुनै एक लिन छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र अझै समान परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दुबै टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट र टेस्टोस्टेरोन प्रोपियनेट बॉडीबिल्डर्सले मांसपेशिहरू निर्माण गर्न र चक्रहरू काट्न मद्दतको लागि प्रयोग गर्दछन्। औषधिहरूले शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको स्तर बढाउँदछ, जसले परिणामस्वरूप सुधारिएको सेक्स ड्राइभ, मांसपेशिहरूको वृद्धि र शरीरको अत्यधिक बोसो काटिन्छ। धेरै खेलाडीहरूले पनि उनीहरूको प्रदर्शन वृद्धि गर्न दुई-औषधि मध्ये कुनै पनि प्रयोग गर्छन् किनकि उनीहरूले सम्पूर्ण शरीरको शक्ति बढाउँछन् जसले उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम गर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट र टेस्टोस्टेरोन प्रोपियनेट केवल उनीहरूको रासायनिक संरचनाहरूमा भिन्न हुन्छन्, तर उनीहरूले बहुमतहरू साझा गर्दछन्। दुई anabolic स्टेरोइड को लागी खुराक पनि हप्ताको दुई पटक लिनु पर्छ। जे होस्, राम्रो परिणामको लागि दुई सँगै औषधिहरूको प्रयोग गर्न तपाईंको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। यसले दुबै लिन कुनै अर्थ राख्दैन टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate र उही चक्र भित्र टेस्टोस्टेरोन propionate। एक पटकमा एक लिनु अधिक लाभदायक हुनेछ, तर सधैं तपाईंको डाक्टरसँग यकिन गर्नुहोस्। तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा दुबै एनाबोलिक स्टेरोइडहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
एल ओस्ट्रा, आर, एल्मोन्ट, टी।, डिलिगेन्ट, सी, हबर्ट, एन।, एस्क्वेज, पी, र हबर्ट, जे (एक्सएनएमएक्सएक्स)। Anabolic स्टेरॉयड दुर्व्यवहार र पुरुष बांझपन। आधारभूत र नैदानिक ​​रौलिकी, 26(1), 2।
Tretzel, एल।, थॉमस, ए, Geyer, एच।, Gmeiner, जी।, Forsdahl, जी।, पप, V.,… र Thevis, एम। (2014)। एनाबोलिक स्टेरॉइड एस्टरको डोपिंग नियन्त्रण विश्लेषणमा रगतको दागहरू प्रयोग गर्नुहोस्। दबाइ र बायोमेडिकल विश्लेषणको जर्नल, 96, 21-30।
भवानी, SA, Sulaiman, O., हाशिम, आर।, र इब्राहिम, MN (2010)। पातलो-तह क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण स्टेरोइड्स: एक समीक्षा। औषधि अनुसन्धानको उष्णकटिबंधीय जर्नल, 9(3)।
सोलिमिनी, आर।, रोटोलो, एमसी, मास्ट्रोबत्तीस्टा, एल।, मोर्तली, सी।, मिनुटुल्लो, ए, पिचिनी, एस,… र पाल्मी, आई। (एक्सएनयूएमएक्स)। हेपाटोटोकसिटी डोपिंगमा anabolic androgenic स्टेरोइडको अवैध प्रयोगको साथ सम्बन्धित। यूरो रिभ मेड फार्माकोल विज्ञान, 21(1 Suppl), 7-16।